Cholera ngaipere: Cabinet | Kwayedza
Cholera ngaipere: Cabinet
21 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-20T20:35:49+00:00 2018-09-21T00:04:30+00:00 0 Views
HURUMENDE yakaumba komiti inozivikanwa nekuti inter-committee iyo ichange ichitsvaga nzira dzekupedza zvachose kupararira kwechirwere chemanyoka echolera muHarare nedzimwe nzvimbo dziri kumativi mana enyika.
Sachigaro wekomiti iyi ndiCde July Moyo avo vanove gurukota rekutongwa kwematunhu, mabasa eruzhinji nekuwaniswa kwedzimba.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi makurukota anoti Dr Obadia Moyo (utano nekurerwa kwevana), Professor Mthuli Ncube (homwe yenyika), Cde Joram Gumbo (mhando dzemoto nekusimudzirwa kwadzo), Cde Prisca Mupfumira (nharaunda nekushanyirwa kwenyika), Retired Chief Air Marshal Perrance Shiri (kurima, mvura, mamiriro ekunze nekugariswa kwevanhu) naCde Monica Mutsvangwa (Kuburitswa kwemashoko nekushanda kwenhepfenyuro).
Cde Mutsvangwa vakazivisa nezveinter-ministerial committee iyi nemusi weChipiri chino apo vakaita musangano wavo wekutanga wekuzivisa vatori venhau zvinenge zvakurukurwa mudare reCabinet vari kumahofisi avo kuMunhumutapa Government Offices, muHarare.
Kuziviswa kwezvinenge zvakurukurwa muCabinet kunoenderana nehurongwa hweHurumende itsva yeSecond Republic nechinangwa chekuti veruzhinji vave neruzivo rwezvinenge zvasungwa mudare iri nedonzvo rekuti pave nekushanda kwakajeka.
Cde Mutsvangwa vachapota vachizivisa vatori venhau svondo roga-roga zvisungo zvakakosha zvinenge zvawirinwa mushure mekusangana kweCabinet.
Musangano wekuzivisa zvinenge zvabuda muCabinet uyu uchapindwa naChief Secretary to the President and Cabinet, Dr Misheck Sibanda, pamwe nemakurukota ayo anenge aine zvaanofanirwa kuita mukufambisa zvirongwa zvinenge zvawiriranwa mudare iri.
“Cabinet yaumba komiti yeinter-ministerial, iyo ichatungamirira munguva pfupi iri kutevera neinouya, nyaya dzekurwisa kupararira kwecholera munyika,” vanodaro Cde Mutsvangwa.
Vanoti dare iri rakatura zvakare chisungo chekuti makanzuru ose emumaguta nemadhorobha anofanirwa kuve nenzira dzinoazivisa mamiriro anenge akaita zvakadai semapombi anotakura tsvina nemvura inoshandiswa neveruzhinji kuitira kuti azive nekukasika apo panenge pachida kugadziriswa. Makanzuru aya anofanira kuona zvakare kuti mapombi emasuweji neemvura avandudzwa.
“Chekupedzisira, kuitira kuti pave nekushanda kwakajeka pamwe nekuona mafambiro ebasa mukurwisa kupararira kwecholera, Cabinet yakaita chisungo chekuti komiti yeinter-ministerial inofanira kupota ichizivisa vakuru-vakuru venyika (Presidency) mafambiro azvinenge zvichiita,” vanodaro Cde Mutsvangwa.
Vanoti Cabinet inotenda nerutsigiro rwekurwisa cholera kubva kumapoka akasiyana.
Cde Mutsvangwa vanotiwo nechinangwa chekuti kushandiswa kwemari yekurwisa cholera iri kubva kuvabatsiri kuve kwakajeka, dare reCabinet rakawirirana kuti mari iyi yose inofanira kuendeswa kubazi rinoona nezvehomwe yenyika.
Kusvika pakutanga kwesvondo rino, cholera yange yauraya vanhu 30 munyika apo vamwe 5 000 vari kurapwa kuzvipatara.